မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၂၇၈ ၊ တော်သလင်း
ရန်ကုန်ဘဆွေသည် ဘဝကြင်ဖော် ဒေါ်မြသွေး နှင့် သားသမီးများဖြစ်ကြသော မမေသွဲ့ဆွေ၊ မသက်နွဲ့၊ မမြမူမူ၊ မောင်ဆွေညို၊ မဆင်းရွှေရည်၊ မလှလှနု၊ မမြဆွေ၊ မောင်သက်မှူး၊ မအိအိချော နှင့် မြေး (၁၆) ယောက်တို့ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် စွန့်ခွာအနိစ္စရောက်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီး၏ ဈာပနသို့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ သူ့ကိုချစ်သော အနုပညာမောင်နှမများ (၈၄) ဦးခန့် လာရောက်ခဲ့ကြသည်ကိုလည်း ဆရာကြီး၏ နာရေးအမှတ်တရ မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ရန်ကုန် ဘဆွေ ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ ဘဆွေ, ရန်ကုန်. ရန်ကုန်ဘဆွေ မှ ဦးသိန်းဖေမြင့် သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ. ပုဂံစာအုပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရန်ကုန်_ဘဆွေ&oldid=509208" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။